यी ४ बार जन्मिएका स्त्री हुन्छन् सबैभन्दा चतुर र शान्तिप्रिय, तपाई स्वभाव कस्तो ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/यी ४ बार जन्मिएका स्त्री हुन्छन् सबैभन्दा चतुर र शान्तिप्रिय, तपाई स्वभाव कस्तो ?
काठमाडौँ । आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको प्रभाव हुन्छ भने बुधवार बुधको। विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ। शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ।
ज्योतिषका अनुसार जुन बार जन्मियो त्यो बारको ग्रहको प्रभाव जीवनका सबै पाटामा पर्छ । मान्छेको स्वभाव र भाग्य समेत जन्मबारले निर्धारण गर्ने ज्योतिष शास्त्रीको दावी छ । कस्तो हुन्छ कुन बार जन्मिनको मान्छेको स्वभाव र भाग्य थाहा पाउनुस्।